यसकारण धेरै औषधी नखानुहोस्
बुधबार, ६ आषाढ, २०७५
एजेन्सी–वैज्ञानिकहरुले गरेको एक अध्ययनले दैनिक ५ वटाभन्दा बढी औषधिको चक्की लिनुले वृद्धहरुलाई झन् कमजोर बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार बढ्दो उमेरका साथै अधिक औषधि सेवनले कार्य गर्ने क्षमतामा प्रभावित पार्छ ।
कमजोरीको सम्बन्ध बढ्दो उमेर, सहन शक्तिमा कमजोरी र राम्रोसँग कुनै पनि काम गर्न नसक्नु हो । कमजोरी बारम्बार हुनु र लड्नु तथा यसैबीच मृत्यु हुने सम्भावना उच्च रहेको हुन्छ ।
जब हाम्रो उमेर बढ्दै जान्छ, हाम्रो शरिरमा धेरै खाले स्वास्थ समस्या देखिन थाल्छ ।
स्वास्थ्य समस्यासँग जुध्नु एकमात्र उपाय भनेको औषधी लिनु नै हो । शोधकर्ताले भनेका छन्,‘एकदिनमा पाँच चक्कीभन्दा धेरै औषधीहरु लिनु स्वास्थ्यमा निकै नराम्रो असर पर्न जान्छ र खतरा पनि बढ्छ ।’
जर्मनी क्यानसर रिसर्च सेन्टरले अधिक उमेर भएका मानिसहरुबारे अध्ययन गरेका थिए । यस अध्ययनमा २००० मानिसहरु सहभागि रहेका थिए । अध्ययनमा ५० देखि ७० बीचका मानिसहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
‘दबंग ३’ मा यी अभिनेत्रीसँग रोमान्स गर्दैछन् सलमान खान
एजेन्सी । फिल्म ‘भारत’ को सफलतासँगै सलमान खान फिल्म ‘दबंग ३’ को तयारीमा जुटिरहेका छन् । उक्त फिल्मको फ्ल्याशब्याक सीनको लागि उनले ७ किलो तौल कम गर्न परेपछि उनी खाली समयमा आफ्नो फिटनेसमा ध्यान दिईरहेका
आँप खानुका फाइदैफाइदा
एजेन्सी । आँपमा फाइबरका साथै भिटामिन सी पाइने हुनाले शरीरमा कोलेस्ट्रेरोलको लेवल कम गर्न मद्दत गर्छ । साथै मुटु सम्बन्धी समस्याबाट मुक्ति मिल्छ ।
फिल्म ‘साहो’ को शुटिङ सकियो
एजेन्सी । बाहुबली स्टार प्रभास १५ अगस्टमा रिलिज हुने फिल्म ‘साहो’ को लागि एकदमै उत्साहित छन् । उनले फिल्म ‘साहो’ सँग सम्बन्धित खबरहरु आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका हुन्छन् ।
विवाह पश्चात किन एकाएक मोटाउँछन् युवतीहरु
ख्याल गर्नुहोस् यसरी पनि हुन्छ ब्रेकअप !
नाइट साइक्लिङ उत्सवमा २६२० जनाले बनाए विश्व रेकर्ड
एजेन्सी । रुसको राजधानी मस्कोमा आइतबार नाइट साइक्लिंग उत्सव मनाइएको छ । जसमा शहरका १५ हजार भन्दा बढि साइक्लिस्टले भाग लिएका थिए ।
तपाईको भाग्यमा सरकारी जागिर छ कि छैन ? यसरी थाहा पाउनुहोस्
दाऊद डराउँछन् तर काेसँग ?